Qaab-dhismeedka Sariiraha Gogosha Gogosha
Ku soo food leh tiro intaa le'eg oo alaab guri ah, tixgelinno badan waa in la qaataa. Xaqiiqdii, gogosha sariirta, noocyadu waa badan yihiin sida sariiraha min cabirka ilaa maaddada. Sidaa awgeed, haddii aad dareentid gaabis ama ay kugu adag tahay inaad go'aansato midka ugu habboon inuu noqdo doorashada koowaad sida, sidee ku saabsan barashada qaabkan sariirta boqoradda oo madaxa la saaray?
Guud, waxa aan waqti ku qaadno in aan ka fikirno ayaa ah sida loo helo furaash sax ah oo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, qof kasta oo soo iibsaday gogosha sariirta ayaa ku raacsan muhiimadda ay leedahay oo inta badan qaadata dadaal intaas la eg. Ku soo food leh tiro intaa le'eg oo alaab guri ah, tixgelinno badan waa in la qaataa. Xaqiiqdii, gogosha sariirta, noocyadu waa badan yihiin sida sariiraha min cabirka ilaa maaddada. Sidaa awgeed, haddii aad dareentid gaabis ama ay kugu adag tahay inaad go'aansato midka ugu habboon inuu noqdo doorashada koowaad sida, sidee ku saabsan barashada qaabkan sariirta boqoradda oo madaxa la saaray?
Qaabka sariirta boqoradda ee gogosha leh ee gogosha leh ayaa ah sheyga qoraalka saxda ah ee lagu dhejiyo qol jiif kasta oo leh qaabab kala duwan. Qurxinta quruxda badan ee qurxinta quruxda badan leh iyo naqshad jilicsan ayaa ka dhigaysa mid qurux badan oo ilaalin leh. Xadhkaha dhinaca sare ee dahaadhka leh waxay abuuraan muuqaal qurux badan oo qurux badan oo si dhammaystiran ugu dhejisan jibbaar gogol-xaadh ah oo madax-madaxeed kor u sarraysa leh. Qalfoofka safku wuxuu si buuxda u taageeraa joodarigaaga. Looxyada ku wareegsan waxay ku hagaajin karaan joodariga salka. Lugaha sariiraha ee waara oo heerkoodu sarreeyo ayaa abuuraya naqshad muuqaal muuqaal ah oo si fiican ula socota qaababka iyo doorbidyada badankood. Wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad si dhakhso leh oo fudud u rakibto qolkan sariirta waxay ku jiraan qayb. Maraakiibta si deg deg ah oo badbaado leh loogu duubay hal sanduuq, xaq u leedahay bakhaarkaaga.
Nooca: Alaabta guriga, Qolka jiifka
Waxyaabaha: Dhar; Bir;
Muuqaal: Alaab Casri ah
Magaca badeecada: Qolka jiifka sariirta boqoradda sariirta madaxa ayaa la saaray
Lambarka Moodalka: BF-AU01-04
Shaqaynta: Sariirta Cunitaanka
Cabbir(cm): 137L * 190W
Cabbirka(cm): 139L * 192W
A: Haa, waxaan leenahay midabbo badan oo aan ka kala dooran karno qalab kala duwan sida maqaarka Top hadhuudhka, PVC, WAA, ama dhar.